डा. महत र स्वराजबीच साढे १२ बजे भेटवार्ता हुँदै
काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच अहिले साढे १२ बजे दिवाभोज बैठक हुने भएको छ ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण र सहयोग आदनप्रदान तथा सम्झौताका विषयमा छलफल हुनेछ । नेपालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा उठाउने एजेण्डाका बारेमा परराष्ट्रमन्त्री डा. महतले स्वराजलाई जानकारी दिने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई सहज बनाउन पराराष्ट्रमन्त्री आइतबार दिल्ली गएका हुन् ।
विदेशमन्त्री स्वराजपछि आज साँझ ऊर्जा, सडकलगायत विभिन्न भारतीय मन्त्रीसँग परराष्ट्रमन्त्री महतले भेट्ने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्रमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एकराज पाठकले बताए । नेपालको ऊर्जा संकट समधान गर्न भारतबाट थप बिजुली खरिद गर्ने, पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको पाठकले जानकारी दिए । यस्तै बैठकमा भारतले भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा दिने प्रतिबद्धता जनाएको ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण सम्झौताको विषयमा पनि छलफल हुने भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री महतले हिजो र आज गरी विभिन्न्न भारतीय राजनीतिज्ञसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा पछिल्लो समयमा नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा छलफल भएको पाठकले बताए । उनका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री महतले भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी, डीपी त्रिपाठीलगायत वरिष्ठ भारतीय नेतासँग भेटघाट भएको उनले जानकारी दिए ।
तस्बिर ः परराष्ट्रमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार
काठमाडौं । कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो भूमिकामा प्रश्न उठाएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा बैठकमै आक्रोशित भएका छन् । केन्द्रीय सदस्य... ३९ मिनेट पहिले